वीरेन्द्र रावल । एक जना बुज्रुक एवं पाका राजनीतिज्ञले समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुरा गर्ने क्रममा भनेको कुराले मलाई स्मरण गरायो जुन कुरा भरतपुर महानगरपालिकाको स्थगित मतगणना पछि पुनः मतदानबाट शनिबार प्राप्त परिणामसँग ठिक मिल्दोजुल्दो छ । ती पाका राजनीतिज्ञले भनेका थिए कि, बाबु यो राजनीति भन्ने कुरा छलछाम, छलकपट, साम, दाम, दण्डभेदबाट मात्र गर्न सकिने व्यवसाय बनाइयो आजभोलि । तर राजनीति यस्तो पवित्र उद्देश्य बोकेको… विस्तृत समाचार
सक्कली कम्युनिष्ट र सोकल्ड कम्युनिष्ट
डा.बद्रीविशाल पोखरेल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालका अनुसार नेपाली कम्युनिष्टहरु मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन् । एकथरि सिद्धान्तनिष्ठ, अध्ययनशील, सच्चा, इमान्दार, त्यागी, समर्पित र सतिसालझैँ सय वर्ष लडा,पडा र खडा खालका कम्युनिष्ट । अर्काथरि सोकल्ड, अर्थात् कथित, गफाडी चाकरीबाज र बौद्धिक विलास गर्ने कम्युनिष्ट हुन्छन् । हुन पनि भातका पछि हत्ते हाल्नेहरु सदासर्वदा भातलाई नै केन्द्रमा राख्छन् । तर भविष्यका लागि लागिपर्नेहरु भातलाई भोलि… विस्तृत समाचार
​के चीन–भारत शीतयुद्ध सम्भव छ ?
रवीन्द्र श्रेष्ठ । हालैका दिनहरुमा चीन र भारतबीच दोक्लाम क्षेत्रमा भएको गम्भीर सीमा विवादपछि युद्धका सम्भावनाहरुबारे विश्वव्यापी रुपमा चर्चा भइरहेको छ । तर जसले जतिसुकै तर्क गरेपनि चीन र भारतजस्ता आणविक हतियार भएका देशहरुबीच ठूलो स्तरको युद्धको तत्काल सम्भावना रहेको छैन । आणविक हतियार यस्तो विनासकारी हतियार हो जसले स्वयम् विनासकारी ठुला युद्ध रोक्ने कारण बनेको छ । चीन र भारत दुवै देशसँग एक अर्को… विस्तृत समाचार
​ओखलढुंगामा ती हरिया दिनहरु
बिन्दिया प्रधान । श्रावण महिना आफँै हरियोको प्रतीक हो । गाँउघरमा असार, साउन र रोपाई एकाकार हुन्छन । चारैतिर हरियाली, झमझम बर्षा । मनमा त्यसैत्यसै उमंग ल्याइदिने यी हरिया महिनाको महत्व उमंग मात्र नभएर वर्ष दिनको उत्पादनको आंकलन पनि हो । यथेष्ठ मात्रामा पानी परेन भने हाम्रो जस्तो मौसममा भर पर्ने खेती किसानी चौपट हुन्छ । किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीको निदैहराम हुन्छ रोपाई नहुने र उत्पादन… विस्तृत समाचार
​माओवादी केन्द्रको पराजय बैठक
रवीन्द्र श्रेष्ठ । हालै नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘पराजय बैठक’ सम्पन्न भएको छ । सधैं विजय बैठक गर्ने बानी परेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि पराजय बैठक गर्न बाध्यकारी परिस्थिति आइपरेको थियो र त्यस्तो पराजय बैठकको श्रृंखला जारी छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा शर्मनाक पराजयपछि सुरु भएको त्यस्तो पराजय बैठक श्रृंखलाहरुमा अहिलेको स्थानीय सरकारहरुको चुनावमा पनि शर्मनाक पराजय भएपछिको बैठकसम्म आउँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी… विस्तृत समाचार
आर्थिक समृद्धिको बाटो ओबीओआर
बिन्दिया प्रधान । नेपालले सन २०१७ को मे, १२ अर्थात् गत वैशाख २९ मा चीनको एउटा बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात् ओबिओआर परियोजनामा सम्झौता गरेको थियो । त्यतिखेर मे, १४ देखि १५ मा चीनको बेइजिङमा हुन गइरहेको विश्वका सयभन्दा बढी प्रबुद्ध र विज्ञ ब्यक्तिहरुको सहभागितामा दिगो विकासका लागि विश्वको भूमिका जस्तो बिषयमा छलफल हुँदै थियो । त्यसैले, त्यसको ठिक तीन दिनअघि नै प्रतिबद्धता… विस्तृत समाचार
​दाहाल–देउवा अलमल के का लागि ?
रवीन्द्र श्रेष्ठ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार हटाउन पुष्पकमल दाहाललाई सिखण्डीको रुपमा प्रयोग गर्ने सफलता प्राप्त गरेपछि विदेशीहरु हौसिएका थिए । पुष्पकमल दाहालले पनि सत्तामा रहेर केही नाम र पुग्ने दाम जोडेपछि चुनाव गराउँदा पहिलो हुन नसके पनि एमाले कांग्रेसको हाराहारीमा चुनाव जित्ने सोच बनाएका थिए । त्यसैले दाहाल पनि चुनाव गराउन तयार भए । साथै विदेशी शक्तिले पनि ओली सरकार गिराएपछि एमालेले… विस्तृत समाचार
​भरोसाको सेतु ओवीओआर
बिन्दिया प्रधान । प्राचीनकालको ‘सिल्क रोड’ को बिस्तारित नयाँ अवधारणा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ नामाकरणसहित झुल्किएको एउटा चिनियाँ सूत्रपातले हाल विश्वमा चासो र चर्चा बटुलेको छ । के हो त यो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ भनेको ? यस सम्बन्धी प्राप्त केही जानकारीअनुसार यो चीनको असल छिमेक नीतिकै एक अंगको रुपमा बिभिन्न देशहरुसँग गरिने आर्थिक सहभागितामूलक सम्बन्धनको एक कडी हो । यसको पृष्ठभूमिलाई सम्झँदामध्ये एशियादेखि युरोपसम्मको यात्रा गरिने… विस्तृत समाचार
तराईमा राष्ट्रवादको तरंग
प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल । ढिलै भए पनि तराइ मधेसमा राष्ट्रवादको तरल तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेस र मधेसी विरोधी भनेर लगाइएको भड्काव मधेसमा नै खण्डित हुन थालेको देखिन्छ । झुटो ट्क्दिैन भनेझैँ तराइमा भुइँतहमा घनीभूत रुपमा छरिएको एमाले केन्द्रित फरेबहरु अब जमिन तहबाट फाट्दै गएको यथार्थ भनेकै दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम हो । तराई मधेसमा राष्ट्रिय जनता… विस्तृत समाचार
रवीन्द्र श्रेष्ठ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएपछि अहिले पुनः संविधान संशोधनको लागि सरकारमा रहेका दलहरुको गृहकार्य तीब्र भएको छ । देउवाकै नेतृत्वमा विवादास्पद महाकाली सन्धी दुईतिहाईले पारित गरेको हुनाले यसपाली पनि देउवाकै नेतृत्वमा सिमाना हेरफेरको मुख्य विषय रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र भारतीय सत्ताका धेरैको विश्वास बढेको बताइन्छ । जसरी सामदाम, दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर महाकाली सन्धी दुईतिहाइले… विस्तृत समाचार